Pnpkhabar.com | Popular Nepali News Portal सकियो ३ जिल्लाका सीडीओहरुको बैठक, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे के भयो निर्णय ? - Pnpkhabar.com
सकियो ३ जिल्लाका सीडीओहरुको बैठक, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे के भयो निर्णय ?
काठमाडौं, असार १३ : काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु (सीडीओ)हरुको बैठक सकिएको छ ।
तर निषेधाज्ञाबारे निर्णय भोलि मात्रै गरिने भएको छ । आज बसेको बैठकले मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेपनि त्यसबारे थप भोलि निर्णय गरिने काठमाडौंका सीडीओ कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
उनले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको सन्दर्भमा प्रस्ताव आएपनि त्यसबारे आपसी छलफल गरेर मात्रै थप निर्णय गरिने बताए । “आजको बैठकले निषेधाज्ञा थप गर्नेबारे अनौपचारिक निर्णय गरेको छ तर कति समय थप गर्ने भन्ने विषयमा भोलि मात्रै निर्णय हुनेछ ।”
उनले भने- “सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको सवालमा प्रस्ताव भने आएको छ तर त्यसबारे भोलि आपसी छलफल गरेर मात्रै निर्णय गरिनेछ ।” आज बसेको ललितपुरको डीसीसीएमसीको बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको प्रस्ताव तीनै जिल्लाको बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।